ဘိုစာကြိုက်သူလေးတွေအတွက် အရသာရှိတဲ့ Casseroles လုပ်စားကြမယ် ! – Trend.com.mm
Posted on April 23, 2018 by Wint
Casseroles ဆိုတာဘာလဲ ?
Casseroles ကို ၁၈၆၆ခုနှစ်တုန်းက ပြင်သစ်လူမျိုး Elmire Jolicoeur က ခေတ်သစ် စားစရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Casseroles ကို ဘာလင် ၊ New Hamsphire မှာ တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ Casseroles ကို အရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာတစ်ခုအဖြစ် ချက်ပြုတ်ခဲ့ရာမှာ အမေရိကန်မှာ ၂ဝရာစုနှစ်အတွင်း ရေပန်းစားသွားခဲ့ပါတယ်။ Casseroles မှာ အသီးရွက်မျိုးစုံ၊ ဂျုံမှုန့် ၊ ဆန် ၊ အာလူး ၊ ချိစ်တို့နဲ့ရောစပ်ထားတာကြောင့် တစ်ခါစားလိုက်တာနဲ့ အရသာအရမ်းရှိပြီး ဗိုက်လည်းဝသွားစေပါတယ်။ ချက်ပြုတ်နည်းက လုပ်ရမခက်ပါဘူး။ စားနေကြအစားစားတွေနဲ့မတူပဲ အရသာသစ်ဆန်းတွေကို မြည်းစမ်းချင်သူများအတွက် Casseroles လေးကို လုပ်စားကြည့်ဖို့ ဝေမျှပေးလိုက်တယ်နော်…
– အမဲသား (၅ဝဝ ဂရမ်)
– အာလူး (၁ ကီလိုဂရမ်)
– ကြက်ဥ ၁လုံး
– နွားနို့ (၂၅ဝ မီလီလီတာ)
– ထောပတ် (၁ဝဝ ဂရမ်)
– ချိစ် (၅ဝ)ဂရမ်
– ဆား ၊ ငရုတ်ကောင်း
အခွာနွှာထားတဲ့ အာလူးကို ဆားရည်ထဲမှာ ထည့်ပြုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ရေတွေကို ခပ်ထုတ်လိုက်ပြီး ထောပတ် ၅ဝ ဂရမ်ကို အာလူးနဲ့ရောသမွှပါ။ နွားနို့ကိုအပူပေးပြီး အာလူးအရောထဲထည့်လိုက်ပါ။ တစ်သားတည်းဖြစ်သွားသည်အထိ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့မွှေပေးဖို့လိုပါတယ်။
ကြက်သွန်နီကို အခွံနွှာပြီး အစိတ်စိတ်လေးတွေ လှီးပါ။ ရွှေရောင်ပြောင်းသည်အထိ ထောပတ်ဆီနဲ့ ဆီသတ်ပေးပါ။ ပြီးရင် နုပ်နုပ်စင်းထားတဲ့ အသားကို ကြက်သွန်ဆီသတ်နဲ့ထည့်မွှေပြီး ဆားအနည်းငယ်ဖြူးလိုက်ပါ။ အသားကျက်လာပြီလို့ထင်ရင် ကြက်ဥဖောက်ထည့်ပြီး သမပေးပါ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံခွက်လေးထဲ အမဲသားအရောကိုထည့် ၊ ပြီးရင် စောနက အာလူးအရည်တွေကိုအပေါ်က လောင်းထည့်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အမဲဆီနဲ့ ထောပတ်ဆီကိုရောပြီး အပေါ်ကနေ ဇွန်းနဲ့ ဖြန့်လိုက်ပါ။
၁၅မိနစ်လောက် ဖုတ်ပြီးတာနဲ့ မီးဖိုထဲကနေထုတ်ကာ ကိုယ်လိုသလောက်ချိစ်တွေအပေါ်က ထည့်ပါ။ ပြီးရင် နောက်ထပ် ၅မိနစ်လောက် ဖုတ်ပြီးတာနဲ့ အရသာရှိတဲ့ Casseroles လေးတစ်ခုကို စားသုံးနိုင်ပါပြီ။ အရသာကတော့ ရှယ်မှရှယ်ပဲ … !
Casseroles ကို ၁၈၆၆ခုနှဈတုနျးက ပွငျသဈလူမြိုး Elmire Jolicoeur က ခတျေသဈ စားစရာတဈခုဖွဈတဲ့ Casseroles ကို ဘာလငျ ၊ New Hamsphire မှာ တီထှငျခဲ့ပါတယျ။ Casseroles ကို အရသာရှိတဲ့ဟငျးလြာတဈခုအဖွဈ ခကျြပွုတျခဲ့ရာမှာ အမရေိကနျမှာ ၂ဝရာစုနှဈအတှငျး ရပေနျးစားသှားခဲ့ပါတယျ။ Casseroles မှာ အသီးရှကျမြိုးစုံ၊ ဂြုံမှုနျ့ ၊ ဆနျ ၊ အာလူး ၊ ခြိဈတို့နဲ့ရောစပျထားတာကွောငျ့ တဈခါစားလိုကျတာနဲ့ အရသာအရမျးရှိပွီး ဗိုကျလညျးဝသှားစပေါတယျ။ ခကျြပွုတျနညျးက လုပျရမခကျပါဘူး။ စားနကွေအစားစားတှနေဲ့မတူပဲ အရသာသဈဆနျးတှကေို မွညျးစမျးခငျြသူမြားအတှကျ Casseroles လေးကို လုပျစားကွညျ့ဖို့ ဝမြှေပေးလိုကျတယျနျော…
– အမဲသား (၅ဝဝ ဂရမျ)
– အာလူး (၁ ကီလိုဂရမျ)
– ကွကျဥ ၁လုံး
– နှားနို့ (၂၅ဝ မီလီလီတာ)
– ထောပတျ (၁ဝဝ ဂရမျ)
– ကွကျသှနျနီ ၁လုံး
– ခြိဈ (၅ဝ)ဂရမျ
အခှာနှာထားတဲ့ အာလူးကို ဆားရညျထဲမှာ ထညျ့ပွုတျလိုကျပါ။ ပွီးရငျရတှေကေို ခပျထုတျလိုကျပွီး ထောပတျ ၅ဝ ဂရမျကို အာလူးနဲ့ရောသမှပါ။ နှားနို့ကိုအပူပေးပွီး အာလူးအရောထဲထညျ့လိုကျပါ။ တဈသားတညျးဖွဈသှားသညျအထိ စိတျရှညျရှညျနဲ့မှပေေးဖို့လိုပါတယျ။
ကွကျသှနျနီကို အခှံနှာပွီး အစိတျစိတျလေးတှေ လှီးပါ။ ရှရေောငျပွောငျးသညျအထိ ထောပတျဆီနဲ့ ဆီသတျပေးပါ။ ပွီးရငျ နုပျနုပျစငျးထားတဲ့ အသားကို ကွကျသှနျဆီသတျနဲ့ထညျ့မှပွေီး ဆားအနညျးငယျဖွူးလိုကျပါ။ အသားကကျြလာပွီလို့ထငျရငျ ကွကျဥဖောကျထညျ့ပွီး သမပေးပါ။ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ပုံစံခှကျလေးထဲ အမဲသားအရောကိုထညျ့ ၊ ပွီးရငျ စောနက အာလူးအရညျတှကေိုအပျေါက လောငျးထညျ့ပါ။ နောကျဆုံးအနနေဲ့ အမဲဆီနဲ့ ထောပတျဆီကိုရောပွီး အပျေါကနေ ဇှနျးနဲ့ ဖွနျ့လိုကျပါ။
၁၅မိနဈလောကျ ဖုတျပွီးတာနဲ့ မီးဖိုထဲကနထေုတျကာ ကိုယျလိုသလောကျခြိဈတှအေပျေါက ထညျ့ပါ။ ပွီးရငျ နောကျထပျ ၅မိနဈလောကျ ဖုတျပွီးတာနဲ့ အရသာရှိတဲ့ Casseroles လေးတဈခုကို စားသုံးနိုငျပါပွီ။ အရသာကတော့ ရှယျမှရှယျပဲ … !